Masimbavy Marie Madeleine
22 jolay — Niaina tamin’ny taonjato voalohany i Marie Madeleine rahavavin’i Marthe, anabavin’i Lazare izy. Nanan-katao tokoa ny ray aman-dreniny ary nandova trano be tao Magdala tao Galilée izy ireo. Izany no nahatonga ny anaram-bositr’i Marie hoe Madeleine izany hoe avy ao Magdala.
Niaina tao anaty ny filibana izy ka nahatonga azy nantsoina hoe ilay vehivavy mpanota. Eto moa dia samy manana ny filazany ireo mpandalina ny Soratra Masina ka mametra-panontaniana hoe olona iray ihany ve ilay antsoina hoe ilay vehivavy mpanota sy ilay vehivavy namoahan’i Jesoa demony fito. Ao amin’ny Evanjelin’i Masindahy Lioka dia voalaza fa i Marie Madeleine, ilay nanaraka an’i Jesoa hatrany Kalivery sy nahita voalohany azy nitsanga-kovelona. I Lioka ihany koa dia milaza fa izy ilay vehivavy voalohany amin’ireo mpanara-dia an’i Jesoa. Ary ambaran’i Masindahy Joany fa nitsangana teo akaiky ny hazofijalian’i Jesoa i Marie Madeleine niaraka tamin’i Marie Renin’i Jesoa tamin’ny fotoana nahafatesan’i Jesoa. Izy ihany koa no nitondra ny zava-manitra hahosotra amin’ny vatan’i Jesoa tamin’ny maraina ny andron’ny sabata. Ary izay no nahatonga ihany koa ny filazana fa izy no nahita ny fasana nivoha sy nampilaza ny mpianatry i Jesoa sy ny Apôstôly. Izy izany no nanambara voalohany ny nitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty. Ka izay no antony niantsoan’i Masindahy Hypolite azy hoe apôstôlin’ny Apôstôly.
Hitantsika matetika ao amin’ny Evanjely i Marie Madeleine. Mibanjina sy mihaino an’i Jesoa izy tao an-tranony tao Béthanie raha i Marthe variana nikarakara ny tao an-trano. Hoy i Jesoa tamin’izay hoe i Marie no nifidy ny anjara tsara. Voalaza ihany koa fa leo ny fampianaran’izy telo mianadahy ny olona ka nandefa azy ho any an-dranomasina tamin’ny lakana tsy misy fivoy. Na dia izany aza anefa dia nandeha araka ny tokony ho izy ihany ilay lakana ka tonga teny amin’ny sisin-tanin’i Marseille izy ireo. Ary i Madeleine avy eo nihanika tendrombohitra ary nitoka-monina tany, nentin’ny anjely. Nandritra izany fiainany tany izany moa i Marie Madeleine dia nitomany noho ny fahotany sady izany ihany koa no nanehoany ny fibebahana sy ny fitiavana.